अघिल्लो वर्षको तुलनामा तरुलको मूल्य प्रतिकेजी दश रुपैयाँ सस्तो ! « News24 : Premium News Channel
अघिल्लो वर्षको तुलनामा तरुलको मूल्य प्रतिकेजी दश रुपैयाँ सस्तो !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा तरुलको मूल्य सस्तिएको छ । मागभन्दा बढी भित्रिएपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा तरुलको मूल्य प्रतिकेजी दश रुपैयाँ सस्तो भएको हो ।
माघे संक्रान्तिमा तरुलको माग अत्याधिक हुन्छ । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो वर्ष माघे संक्रान्तिका लागि ६ सय टन तरुल काठमाडौं भित्रिएको थियो । यस वर्ष ९ सय टन ल्याइएकाले मूल्य केही घटेको हो । धेरै भित्रिदा ‘स्टक’ रहने डरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सस्तोमा तरुल विक्रि भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
सिमल तरुलको मूल्य सबैभन्दा बढी प्रतिकेजी तीन सय रुपैयाँ छ । हात्तिपाईले १ सय २० रुपैयाँमा विक्री हुँदा सामान्य तरुलको मूल्य ५० रुपैयाँ छ । बजारमा घर, वन, सिमल र पानी तरुल उपलब्ध छ । यसवर्ष काठमाडौं उपत्यकामा सवैभन्दा धेरै तरुल सर्लाहीबाट भित्रिएको छ ।
सुनसरी, चितवन र धादिङलगायत जिल्लाबाट पनि तरुल ल्याइएको समितिले जनाएको छ । यस्तै, समितिका अनुसार माघे संक्रान्ति लक्षित गरेर काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ५० टन सक्करखण्ड र १ सय ३० टन पिडाँलू भित्र्याइएको छ । माघे संक्रान्तिमा तरुल खाँदा चिसो हटेर जाने जनविश्वास छ ।